स्वास्थ्य खबर Archives - Nepali in Australia
Category: स्वास्थ्य खबर
January 18, 2022 autherLeaveaComment on क्यान्सर देखि सुगर सम्मका रोगलाई घरमै बसेर निको पार्न सकिने यी नेपाली जडिबुटी (भिडियाे हेर्नुस्)
क्यान्सर देखि सुगर सम्मका रोगलाई घरमै बसेर निको पार्न सकिने यी नेपाली जडिबुटी (भिडियाे हेर्नुस्) । याे समाचारकाे भिडियाे तल अन्तिममा राखिएकाे छ तल गएर हेर्न सक्नुहुनेछ । याे पनि, ग्यास्ट्रिक,क्यान्सर लगायत धेरै रोगका लागि उपयोगी सुकमेलका यस्ता छन् आश्चर्यजनक फाइदाहरु, जानकारीका लागि सेयर गर्नुहाेला । हाम्रो भान्सामा प्राय नटुट्ने मसला हो सुकमेल । खासमा […]
ओमि`क्रोन पोजेटिभ हुने बित्तिकै तुरुन्तै गर्नुहोस् यी ४ काम, छिट्टै छुटकारा पाउनु हुनेछ !
January 17, 2022 autherLeaveaComment on ओमि`क्रोन पोजेटिभ हुने बित्तिकै तुरुन्तै गर्नुहोस् यी ४ काम, छिट्टै छुटकारा पाउनु हुनेछ !
म`हामा`री भाइरसले विश्वभर तहसनहस बनाएको छ । ओमिक्रोन आएपछि अवस्था झन् गम्भीर बनेको छ । यो घा`तक भेरियन्टको आगमन पछि भारतमा कोरोनाका नयाँ दैनिक केसहरू दुई लाख नाघेको छ। कोरोनाको कुनै स्थायी उपचार छैन र यसै कारण विज्ञहरूले कोरोना रोकथाम र रोकथामका लागि खोप र कोरोनासँग सम्बन्धित अन्य नियमहरू पालना गर्न सल्लाह दिइरहेका छन्। ओमिक्रोनका […]
January 16, 2022 autherLeaveaComment on Exclusive : कोरोना भाइरसले पुरुषहरूको बच्चा जन्माउने शक्ति कमजोर बनाएको खुलासा !
काठमाडौं । कोरोना महामारीलाई लिएर एक डरलाग्दो खुलासा भएको छ । एउटा अनुसन्धानले कोरोना भाइरसले संक्रमित पुरुषहरूको बच्चा जन्माउने शक्ति कमजोर बनाएको कुरा पत्ता लगाएको छ । यसले प्रजनन क्षमतालाई असर गर्ने अनुसन्धानले बताएको हो । इराकको एक अनुसन्धानको आधारमा, बीआरडी मेडिकल कलेजको माइक्रोबायोलजी विभागको टोलीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । पहिलो र दोस्रो […]
January 11, 2022 autherLeaveaComment on आँखा रातो-रातो देखियो ? वेवास्ता नगर्नुहोस् ! हुनसक्छ कलेजो र मिर्गौला ख’राबीको संकेत
आँखा रातो-रातो देखियो ? वेवास्ता नगर्नुहोस् ! हुनसक्छ कलेजो र मिर्गौला ख’राबीको संकेत हाम्रो स्वास्थ्य स्थिती कस्तो छ ? के हामी स्वस्थ र तन्दुरुस्त छौं ? रोगमुक्त छौं ? वा कुनै रोगले भित्रभित्रै आक्रमण गरिरहेको छ ? सामान्यत अनुहारमा पनि यसको झलक देखिन्छ। अनुहारका कतिपय संकेतले हाम्रो स्वास्थ्य स्थितीबारे जानकारी दिन्छ। अनुहारको संकेत: गालाहरुको रंग […]
January 6, 2022 autherLeaveaComment on तितेपातीले एक घण्टामै यति ठुलो रोगहरु निको पार्दछ ! एकचोटी अबस्य पढ्नु’होला
तितेपातीमा धेरै औषधीय गुण हुन्छन् । तितेपाती खाने भन्दा पनि शरिरका बाहिरी अङ्गमा प्रयोग गर्न बढी लाभदायक मानिन्छ । जहाँ तहीँ पाइने तितेपातीमा औषधीय गुण हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भए पनि यसको प्रयोगबारे सबैलाई थाहा हुँदैन । तितेपातीको प्रयोगबारे यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । तितेपातीको तेलबाट हाड दुखाइको औषधि, चिलाउने रोगको औषधि, उच्च रक्तचाप र […]
January 6, 2022 January 13, 2022 autherLeaveaComment on खुट्टाको नशा बटारिएर फुल्ने गरेको छ ? भने आजैबाट खान छोड्नुहोस् यस्ता चिज
खुट्टाको न शा फुल्ने स-मस्या (भेरिकोज भेन) धेरैलाई हुन्छ। खुट्टामा न,शा फुल्दै गएपछि त्यसले खुट्टाको स्वरुप नै खराब देखिन्छ।यसरी न,शा सुन्निनु भनेको न,शाहरु काम नलाग्ने हुनु हो। यस्तो स-मस्याको समाधान गर्न अहिले सजिलो विधिबाट उपचार गरिन्छ। खुट्टाको न,शा फुल्ने स-मस्याको उपचारमा सबैभन्दा भरपर्दो र उ#च्च गुणस्तरीय प्रविधिलाई ‘रे’डियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसन’ भनिन्छ। धुलिखेल अ-स्पतालमा सन् २०१३ अगस्टबाट […]
बिहानै खाली पेटमा बिरे नुन पानी पिएर त हेर्नुहोस्, एक हप्तामै देख्नुहुनेछ नतिजा
January 6, 2022 autherLeaveaComment on बिहानै खाली पेटमा बिरे नुन पानी पिएर त हेर्नुहोस्, एक हप्तामै देख्नुहुनेछ नतिजा
यदी तपाई स्वस्थ्य जीवन जिउन चाहानुहुन्छ भने हरेक दिन बिहान बिरे नुन मिसाएको पानी पिउन सुरु गर्नुहोस्। यसले तपाईको ब्लड सुगर, ब्लड प्रेसर, उर्जामा सुधार, मोटोपन जस्ता विभिन्न किसिमका समस्याबाट छुटकारा दिने गर्दछ। बिरे नुनमा ८० प्रतिशत खनिज र जीवनका लागि चाहिने सबै आवश्यक प्राकृतिक तत्व पाइने गर्दछ। पानी बनाउने विधि: एक गिलास हल्का तातो […]
January 4, 2022 autherLeaveaComment on चिसोले कुर्कुचा फुटेको छ ? यसरी प्रयोग गर्नुहोस् केराको बोक्रा
काठमाडौँ । के तपाईलाई थाहा छ, केराको बोक्रामा म्याग्नेसियम, पोटासियम र कार्बोहाइड्रेटजस्ता न्यूट्रिएट्स हुन्छन् ? यति मात्रै होइन, यसले सुन्दरतालाई निखार्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। केराको बोक्रामा रहेको एन्जाइम्सले धेरै वस्तुको सफाईका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जान्नुहोस्, केराको बोक्राको फरक प्रयोग बारेः १) डार्क सर्कल हटाउनः आँखाको तल्लो छेउ भागमा केराको बोक्रालाई घोटेर दल्ने गरेमा […]
January 2, 2022 EditorLeaveaComment on सबैभन्दा तागतिलो फल, खाने बित्तिकै शरीरमा आउँछ स्फूर्ति !
एजेन्सी : फल र सब्जी सेवन स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यिनको सेवनपछि हाम्रो शरीरमा आवश्यक पोषक तत्व, आइरन, मिनरल्स पाइन्छ । फल र सब्जी हाम्रो शरीरलाई रोगको सं’क्रमणबा टाढा राख्न छन् । ​​​फल र सब्जीको सेवन नगर्नाले पनि हाम्रो शरीरमा कैयौं रोगले सहजै आ-क्रमण गर्न सक्दछन् । फल भिटामिनको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । […]
December 28, 2021 autherLeaveaComment on ग्यास्ट्रिक देखि कोलेस्ट्रोल सम्मका राेगहरु केही दिनमै निकाे बनाउने बिरे नुन,हेर्नुहोस् यस्ताे छ प्रयाेग गर्ने तरिका
काठमाडौँ । बिरेनुनकाे यति धेरै फाईदा र राेग निकाे बनाउन सक्ने सक्ति ,तपाईंले बिरेनुनका बारेमा पक्कै सुन्नु भएको होला । यो नुन विभिन्न खालको रोगमा घरेलु उपचारको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ।आयुर्वेदमा त यसको धेरै औषधिहरुमा प्रयोग हुन्छ । सेतो नुनको सट्टा थोरै मात्रामा बिरेनुनको प्रयोग गर्न सकियो भने यसले फाइदा पुग्छ । बिरेनुन प्राकृतिक नुन […]